ओली र प्रचण्डमाथि सर्वाेच्च अदालतले लियो यति ठुलो एक्सन !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
ओली र प्रचण्डमाथि सर्वाेच्च अदालतले लियो यति ठुलो एक्सन !
काठमाडौं – बालकृष्ण ढुंगेल छोड्ने सरकारको निर्णयमा सर्वाेच्च अदालतले एक्सन लिएको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्ड तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पहलमा ढुंगेललाई छाड्ने निर्णय भएपछि सर्वाेच्चले एक्सन लिएको हो। यता प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने ढुंगेललाई छाड्न नहुने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ।
सर्वोच्चले शुक्रबा ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णयका विषयमा २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका ढुंगेललाई आममाफी दिनुपर्ने कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय र बालकृष्ण ढु‌ंगेललाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने या नदिनेबारेमा छलफलका लागि जेठ १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।
सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर ढु‌ंगेललाई आममाफी दिने तयारी गरेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले आममाफी पाउने कैदीको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।